Ra’isul-wasaare;Kheyre oo Booqday Dhaawacyadii Turkiga lageeyay. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Ankara(FMN)—Ra’isul-wasaaraha Xukumada Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane;Xassan Cali Kheyre oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka turkiga ayaa xalay booqday qaar kamid ah dhaawacyadii ku waxyeeloobay weerarkii 14kii bishan October ka dhacay is-goyska Zoppe ee Magaalada Muqdisho.
Ra’isul-wasaaraha ayaa dhaawacyadaasi ku jiray isbitaaladii uu booqday mid mid u kor joogsanayay isaga oo sidoo kalena xaaladooda caafimaad ka wareysanayay dhakhaatiirta ku howlan daaweyntooda iyo eheladii la socotay.
Dhaawacyada qaar oo umuuqday kuwa xaaladooda caafimaad ay aad uga soo raynayso ayaa Waftiga Ra’isul-wasaaraha uga waramay sida ay yihiin iyo waxii ay la kulmeen,iyagoo sheegay in ay aad oogu faraxsanyihiin gurmadka iyo gar-gaarka loo fidiyay ayna ku rajo weynyihiin in ay dalkoodii iyo dadkoodii dib ugu laaban doonaan iyaga oo caafimaad qaba.
Ugu danbayna,Ra’isul-wasaaraha ayaa aad ooga mahadceliyay dhakhaatiirta iyo dawlada turkiga ee u howl-gashay siddii loo bad-baadin lahaay dhaawacyadaasi oo dalka soomaaliya gudahiisa wax looga qaban waayay,waxuuna ilaahay uga baryay inuu Caafimaad Taam ah siiyo.
Previous Previous post: Taariikh Nololeedka General Maxamed Abshir Muuse AUN.
Next Next post: KENYA:Tirinta Codadka Iyo Rabshadaha Oo Is Bar-bar Socda!.